फ्रान्समा राष्ट्रपति चुनाव ; माक्रोंद्वारा ल पेन विरुद्ध मुद्दा दायर
एजेन्सी, २२ वैशाख । फ्रान्समा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका एकजना उम्मेदवार एमानुएल माक्रोंले उनका राष्ट्रवादी प्रतिद्वन्द्वी मारिन ल पेन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। बुधबार ति दुई उम्मेदवारबीच चर्काचर्की परेको टेलिभिजन बहसका बेला ल पेनले माक्रोंलाई विदेशी बैंक खाता, अफशोर एकाउन्टमा पैसा लुकाएको आरोप लगाएकी थिइन्। माक्रोंले आफ्नो...
स्वास्थ्य विधेयकमा राष्ट्रपति ट्रम्पको जित
अमेरिका, २२ वैशाख । अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रमुख चुनावी वाचा पूर्ति गर्ने दिशामा सहयोगी हुने गरि एक नयाँ स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित गरेको छ। अमेरिकन हेल्थ केयर एक्ट नामक उक्त कानूनले विगतको सरकारको पालाको ओबामाकेयर भनिने कानूनलाई खारेजी र विस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। तल्लो सदनले झिनो बहुमतले...
राष्ट्रपतिका प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारबीच आरोप प्रत्यारोप
फ्रान्स, १९ वैशाख । फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनकी अति दक्षिणपन्थी उम्मेदवार मरीन ल पेनले युरोपेली संघ ९इयु० समर्थक मध्यमार्गी प्रतिद्वन्द्वी एम्यानुएल म्याक्रोंलाई निरन्तरतावादी उम्मेदवार भएको आरोप लगाएकी छिन्। म्याक्रों अलोकप्रिय निवर्तमान राष्ट्रपतिसंग सम्बन्धित भएको उनको भनाइ छ। मध्यमार्गी उम्मेदवार एम्यानुएल...
उत्तर कोरियाले फेरि गर्यो क्षेप्यास्त्र परिक्षण
कोरिया, १६ वैशाख । अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले प्योङयाङविरुद्ध कडा कदमहरु चाल्नुपर्ने बताए लगत्तै उत्तर कोरियाले एउटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गरेको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त क्षेप्यास्त्र उडेको केही बेरमा नै विष्फोट भएको थियो। यसअघि यसै महिनाको शुरुमा उत्तर कोरियाले गरेको...
ट्रम्पको टाउको दुखाइ उत्तरकोरिया
एजेन्सी, १५ वैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणु र क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका कारण एउटा ठूलो द्वन्द्व निम्तनसक्ने चेतावनी पुन ः दिएका छन्। उनले कूटनीतिक माध्यमबाट उत्तर कोरियासँगको विवादको हल गर्न चाहेको तर त्यसरी समाधान खोज्नु एकदमै कठीन भएको बताए। यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले अर्को...
मेसेडोनियाको संसद भवनभित्रै झडप
एजेन्सी, १५ वैशाख । एक जना अल्बेनियाली जातीय नेता संसदको सभामुखमा निर्वाचित भएपछि मेसेडोनियाको संसदमा भिडन्तहरु भएका छन्। घाइते हुनेमा समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेता सहित कम्तीमा १० जना छन्। प्रदर्शनकारीहरु पूर्व प्रधानमन्त्री निकोला ग्रुएभस्कीको भिएमआरओ पार्टीका समर्थकहरु थिए जसले नयाँ चुनावको माग गरिरहेका छन्। सामाजिक...
ट्रम्पले सबै सिनेटरलाई ह्वाइट हाउस बोलाए
अमेरिका, १२ वैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको परमाणु र क्षेप्यास्त्र परीक्षण विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाउन राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरुलाई बोलाएर उनले उत्तर कोरिया विश्वका लागि वास्तविक खतरा रहेको र यथास्थिति अस्वीकार्य रहेको धारणा...
‘एचवानबी’ मा कडाई गर्न ट्रम्पको आदेश
अमेरिका, ६ वैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशीलाई दिइने प्रवेशाज्ञासम्बन्धी कार्यक्रममा समीक्षा गर्न ल्याइएको नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारी योजनाहरुको बोलपत्रमा विदेशी ‘कन्ट्रयाक्टर’हरुलाई सहभागी नगराउने नियम पालना गर्न उक्त आदेशले सरकारी...
अमेरिकामाथि आक्रमण गर्न उत्तर कोरिया तयार !
अमेरिका, ५ वैशाख । उत्तर कोरियाका एक जना उच्च सरकारी अधिकारीले अमेरिकाले कुनै सैनिक कारबाही गरे त्यसै दिनबाट पूर्ण रुपमा युद्धमा होमीन उनको देश तयार रहेको बताएका छन्। उत्तर कोरियाका उप विदेशमन्त्री हाङ सोङ योलले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अमेरिकाले आक्रमण गर्न लागेको संकेत पाउने वित्तिकै परमाणु हमला गर्ने चेतावनी दिए। हानले प्योङयाङले...
टर्कीमा जनमत संग्रह ; झिनो मतले एर्दोआन विजयी
टर्की, ४ वैशाख । टर्कीको निर्वाचन बोर्डका प्रमुखले आइतबार भएको जनमत संग्रहमा राष्ट्रपति रजेप तायप एर्दोआन साँघुरो अन्तरले विजयी भएको बताएका छन्। ९९ प्रतिशत भन्दा बढी मत गणना भइसक्दा राष्ट्रपतिको उल्लेख्य रुपमा अधिकार बढाउनुपर्ने एर्दोआनको अभियानले ५१ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मत पाएको जनाइएको छ। टर्कीको प्रमुख विपक्षी दल...
ट्रम्प नीतिमा फेरबदल, रूससंग सम्वन्ध विग्रदै
एजेन्सी, ३१ चैत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरियाली राष्ट्रपति बशार अल असदले निर्दोष गैरसैनिकको बर्बर हत्या गरेको भन्दै गृहयुद्ध अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन नेटो अब अप्रासंगिक नरहेको भन्दै आफ्नो विगतको नीति बदलेका छन्। विगतमा नेटोको अब कुनै काम नरहेको भन्ने सम्मका टिप्पणी गरि...
एजेन्सी, २८ चैत । कप्टिक गिर्जाघरहरुमा भएका आक्रमणपछि इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल–सीसीले देशभर तीन महिने संकटकाल लगाएको घोषणा गरेका छन्। उक्त निर्णयसँगै महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि अब इजिप्टमा प्रहरीसँगै सेना खटिनेछ र सुरक्षा निकायलाई पक्राउ पूर्जी विना गिरफ्तारीहरु गर्ने अधिकार हुनेछ। आइतबार राजधानी कायरो...
सिरियामा अमेरिकाले क्षेप्यास्त्र हान्यो
अमेरिका २५ चैत । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार पचासभन्दा धेरै टोमाहक क्षेप्यास्त्र भूमध्यसागरमा रहेको अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतबाट प्रहार गरिएका छन्। सम्वाददाताहरुसंग बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले उनले रासायनिक हमला गरिएको ठानिएको सिरियाली हवाई अखाडामा अमेरिकी सैन्य कारवाहीको आफूले आदेश दिएको बताए। उनले भने, ‘रासायनिक अस्त्रको...
चीनमा दाह्री र बुर्कामाथि प्रतिबन्ध !
वेइजिङ, १९ चैत । चीनमा हालै एक नयाँ कानुन पारित भएको छ, जसमा लामो दाह्री पाल्न र सार्वजनिक ठाउँमा अनुहार ढाकेर हिड्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । आफूले इस्लामवादी उग्रवादी ठान्ने समूह विरुद्धको अभियानलाई बेइजिङले तीव्र बनाइरहँदा पश्चिम चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा नयाँ कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। उक्त कानूनले इस्लाम धर्म मान्ने उइगर...
पूर्वराष्ट्रपति पार्क हिरासतमा
द.कोरिया, १८ चैत । भ्रष्टाचारको आरोपमा दक्ष्णि कोरियाली अपदस्त राष्ट्रपति पार्क ग्यून हेलाई हिरासतमा लिइएको छ । अदालतको आदेशपछि उनलाई हिरासतमा लिइएको समाचारमा जनाइएको छ । उनलाई राजधानी सोलको हिरासतमा लैजाँदा आत्मसंयमका साथ अघिबढेकी थिइन् । राजधानीको एक अदालतमा बिहीबार अवेरसम्म चलेको सुवाईपछि अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्ने आदेश...